'ओलीको एकलौटी अब चल्दैन, अध्यादेश हामीलाई मान्य हुँदैन' - नेता खनाल - Sidha News
‘ओलीको एकलौटी अब चल्दैन, अध्यादेश हामीलाई मान्य हुँदैन’ – नेता खनाल
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको सबैभन्दा चर्को आलोचना उनकै पार्टी नेकपाबाट भइरहेको छ।
उनी इत्तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यो अध्यादेश फिर्ता नभए बहुमतले कारवाहीसम्मको चेतावनी दिएका छन्। प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको दाहाल-नेपाल समूहको गोप्य बैठकले ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिए कडा प्रतिवादमा उत्रिने निर्णय लिएको छ।
उक्त बैठकमा सहभागी भएका थिए वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि। पछिल्लो समय ओलीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका खनालले बैठकपछि कुरा गर्दै अब पार्टीमा ओलीको एकलौटी नचल्ने चेतावनी दिए।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट क्रुद्ध प्रचण्ड र माधव समूहको बैठकले ओलीविरुद्ध कडा कदम चाल्ने सहमति जुटाएको अवस्थामा खनालले अति नै भएको टिप्पणी गरे। पार्टीमा छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता नगरिए ओलीविरुद्ध पार्टीको बहुमतबाट कारवाहीसम्म गर्ने रणनीति बनाएको खुमलटार श्रोतले जनाएको छ। खुमलटार बैठकले ओलीको एकलौटी निर्णय मान्य नहुने निर्णय लिएको छ। ‘खुमलटार बैठकले ओलीको एकलौटी निर्णय अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ’, वरिष्ठ नेता खनालले भने, ‘कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी कसैलाई ओलीले ल्याएको अध्यादेशबारे थाहा छैन।
यस्तो आश्चर्यलाग्दो तरिकाले अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो? हामीलाई यो कुरा मान्य हुँदैन।’ वरिष्ठ नेता खनालले आफ्नै पार्टीको सरकारले यति ठूलो निर्णय लिँदा पनि थाहा नदिएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘हाम्रो पार्टीको सरकारले यत्रो ठुलो निर्णय गर्दा कुनै जानकारी छैन’, उनले भने, ‘भोलि स्थायी कमिटी बैठक बस्छ। बाँकी कुरा त्यहीँ हुन्छ, यसरी पार्टी सञ्चालनमा समस्या आउँछ।’ खुमलाटारमा प्रचण्ड-माधव समूहको बैठक सकिँदै गर्दा ओलीले बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका थिए। जहाँ उनीसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना सहभागी थिए।
तर बैठकले गरेको निर्णयबारेमा अहिलेसम्म केही खुलाइएको छ। बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका छन्।
चोक-चोकमा कंक्रिटका सजावट : सीमित लाभ,
सेयरमा चलखेल गरेको भन्दै जनरल इन्स्यारेन्सका
आस्था खन्नाः जो फिल्ममा ‘यौन दृश्य
हट्यो काठमाडौं उपत्यकाको तुवाँलो, हेरौं तस्बिरमा
अयोध्याधामको आधिकारिकता प्रमाणित गर्नुपर्छ: प्रचण्ड
ताप्लेजुङबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य तिलकुमारले छाडे
एभरेष्टका पौने सात सय ग्यास सिलिन्डर
घर र गाडी किन्न अबदेखि बैकंले
विश्व बैंक र एडीबीबाट सरकारले १४
माओवादीले गर्‍यो ४ संघीय सांसदलाई कारबाही, निलम्बन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता
दल फेरेर मन्त्री बनेका टंक आङ्बुहाङको सांसद् पद खोसियो
धनगढीमा भीम रावलकाे नेतृत्वमा एमाले नेपाल समूहकाे भेला
माओवादीले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिँदै
विरोधी तह लगाउन मुख्यमन्त्री राईले गठन गरे संसदीय बोर्ड
जो इमान्दार भएर आउँछ, उसैलाई सहयोग गर्ने हो: राजेन्द्र महतो
माधव नेपाललाई कि कारवाही गरेर सिध्याउने, कि कमजोर बनाएर घुँडा टेकाउने !
म भए बेडरुममै पुगेर गाला मुसार्थेँः माधव नेपाल